Ciyaaryahanka Alexis Sanchez oo mustaqbalkiisa u caddeeyey kooxdiisa Arsenal. » Laacib.so | Horyaalka Ciyaaraha Dalka iyo Caalamka
Home/ Champions League/Ciyaaryahanka Alexis Sanchez oo mustaqbalkiisa u caddeeyey kooxdiisa Arsenal.
Ciyaaryahanka Alexis Sanchez oo mustaqbalkiisa u caddeeyey kooxdiisa Arsenal.
Ramzi Yare May 14, 2017
Wararka laxiriira mustaqbalka ciyaaryahanka kooxda Arsenal Alexis Sanchez ayaa sii soconeysa… Laakiin taageereyaasha Naadiga Arsenal ayaa ugu dambeyntii helay war ay ku farxaan.
Su’aalaha la isweydiinayo ee la xiriira mustaqbalka Alexis Sanchez ayaa waxaa ugu waa weynaa, miyuu ka tegayaa Arsenal? Miyuu joogayaa Waqooyiga London? Miyuu ku faraxsan yahay Arsenal? wuxuu doonayaa inuu meel kale aado iyo tartan cusub? Goorma ayuuse saxiixi doonaa qandaraas
Maalin walba sheeko cusub ayaa laga qoraa weeraryahanka heerka caalami ee dalka Chile iyadoo wararkaasi ay tilmaamayaan mustaqbalkiisa. Isbuucyadii lasoo dhaafay Sanchez wuxuu muhiim u ahaa natiijooyinka wanaagsan ee kooxdiisa Arsenal.
Wuxuu bilaabay inuu qoslo sabbatoo ah kooxda ayaa guulo xiriir ah gaareysa, sidoo kalena isku dayeysa inay dhacsato booskeeda Tartanka UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka soo aadan.
Arsenal ayaa guul 4-1 ah ka gaartay kooxda Stoke City Sabtidii, 28 sanno jirkaan ayaana markale xiddig sarre u ahaa kooxdiisa isagoo hal abuure ka ahaa goolkii uu dhaliyey Mesut Ozil, ka dibna shabaqa soo taabtay.
Goolkaas uu ka dhaliyey Potters ka dib, xiddigii hore ee kooxda Barcelona ayaa sameeyey dabaaldeg ay ku qanceen taageereyaasha kooxdiisa Arsenal, isagoo u muuqday inuu u tilmaamayo in uusan meelna ka aadi doonin garoonka FLY Emirates Stadium.
C.Ronaldo Iyo Jaceylkiisa Oo Daawanaya Tartanka Tennis-ka Ee Madrid Open +Sawiro.
Waa ku wee 10ka difaac ee ugu fiican Dunida.?